Genesisi Chitsauko 1 – Mazuva mana ekutanga
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Genesisi Chitsauko 1 – Mazuva mana ekutanga
Genesisi Chitsauko 1 – Mazuva mana ekutanga
Mwari akasika zvinhu zvese asati atanga kutaura pamusoro pemazuva manomwe.
Hapana kutaurwa nezvenguva yakatorwa kusika denga nenyika pavhesi rekutanga muBhaibheri.
Makasununguka kufungidzira chero nguva yamungade kuti inzi ndiyo yakasikwa Denga neNyika. Zvinodaro zvakatora mabhiriyoni emakore kusika nyeredzi dzese nezuva. Mwari aive asina kwaaimhanyira. Kumashure kwezvose, anorarama nekusingaperi kunova kunze kwenguva. Asi, kuisa nguva pazviitiko zvekusika zvakaitwa naMwari anorarama nekusingaperi, chinhu chisina maturo. Tinokwanisa kufungidzira mufananidzo wekusingaperi apo patinenge tisisiri mukati menguva.
Asi hamukwanisi kuisa nguva refu iyi pane chero chipuka chinorarama, sezvo kwaive kusina chinhu chinorarama chaive chasikwa.
Vesainzi vanoti matombo akurisa anopa marasha kana matombo akabva pazvinhu zvakafa ari muchikamu cheCambirian. Anotevera anonzi matombo ejecha (sandstone) ari muchikamu cheOrdovician anofanira kuva ari nemakore anosvika 450 miriyoni. Mugomba remugodhi riri pedyo neguta reLondon kuTexas, chidimbi chedombo reOrdovician chakawanikwa chiine musoro wesando yedare mukati macho. Chaibuda kunze kwedombo rejecha iri waive mubato wesando waive wakagdzirwa nemuti. Mubato wemuti uyu waive wati shandurwei kuita rasha (waive wati shandurwei kuva rasha). Miti yaifanira kuzoshanduka mamiriyoni emakore aizotevera munguva inodaidzwa kuti Kabhoniferasi yaive makore anokwana kuita 300 miriyoni akadarika. Chinhu chega chinorarama chinogadzira misoro yesando nedare vanhu. Saka vanhu nemiti vaive variko munguva yavanodaidza kuti Ordoviciani. Saka zvinotiratidza kuti hatizivi kuti zvakasaririra zvemiti kana mhuka zvinoshanduka sei kuva matombo kana marasha nekufamba kwenguva. Hapana vezvesainzi vati vakwanisa kuita dombo kana rasha kubva pamabhonzo emhuka kana miti mumarabhoritari mavo nekuti kana chimwe chinhu chikafa chinoparadzwa nekuora, kwakaita sehutachiona, zvisati zvashandurwa kuva dombo kana marasha. Mazuva akawanda akaiswa pamarasha nematombo anobva pazvinhu zvinorarama zinenge zvafa anorasisa vanhu. Vanhu vaive vasati vaveko nguva refu yese iyoyo. Tsananguro yevesainzi pamusoro pematombo kana marasha akaitwa nezvinhu zvakafa ndeyekunyepa.
VAROMA 5:12 Saka izvi sezvazvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakapinda kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza.
Rufu rwakazouya panyika mushure mekunge Adamu atadza. Adamu asati atadza kwaive kusina rufu. Miti nemhuka hazvitadzi, saka hazvina kubvira zvafa Adamu asati atadza.
Marasha nemabwe anobva pazvinhu zvakafa akaitika munguva yemvura yaNoa. Zvikamu zvejecha nematombo nemhuka dzaive dzanyura nemiti zvaifukidzwa muzvikamu nezvikamu nemvura zhinji zvichitsindirwa nekurema kwemvura iyi yaive yakafukidza makomo ese. Saka paitove nemakiromita emvura pamusoro penyika.
GENESISI 7:19 Mvura ikakwira kwazvo- kwazvo panyika, makomo marefu ose pasi pedenga rese akafukidzwa.
20 mvura ikasimuka kusvikira pamakubitianegumi namashanu pamusoro pawo, makomo akafukidzwa.
Vezvesainzi havana kubvira vaona izvi kana kuziva mamiriro azvo chaiwo nekuti hazvina kuitika panguva yavairarama. Ndicho chimwe chezvikonzero nei tisingakwanisi kugadzira mabwe nemarasha kubva pazvinhu zvinenge zvafa nhasi uno.
Dehenya kana mabhonzo ehove inodaidzwa kuti Coelacanth akaiswa pakuva nemakore 60 miriyoni. Asi Coelacanth inorarama yerudzi rumwe nezvakasara izvi yakabatwa muna 1938 kuEast London munyika yeSouth Africa. Hapana shanduko yaive yati yaitika pamakore 60 miriyoni iwayo. Saka uku ndiko kukurirwa kukuru kwetsananguro dzekushanduka kwezvinhu dzesainzi. Nhasi uno hove dzerudzi rweCoelacanth dzinowanikwa munzvimbo dzakadzika dzegungwa. Dzinofa kana dzikaburitswa kuuya kunze kwegungwa.
Tupuka tunobhururuka twemichero twunokwanisa kuberekana mumavhiki maviri. Zviuru zvetupuka utwu zvakaberekeswa mumarabhoritari nenzira dzese dzekuora asi tunongoramba turi tupuka twemichero. Vanhu vakaberekesa mizera, zvimiro nendudzi dzakasiyana siyana kuimbwa dzavo asi dzese dzinoramba dziri imbwa. Asi kune miganhu isingakwanisi kudarikwa nerudzi rwechinhu chinorarama ichi, sezvo dzese dzichizoramba dziri imbwa.
Mazera 30 000 ehutachiona hunodaidzwa kuti E. coli hwakadzidzwa (akaenzana nemakore 1 miriyoni enhorondo yevanhu) asi airamba angori rudzi rwehutachiona hwe E. coli kana kuti hutachiona hwakagadziriswa hwe E. coli kana hutachiona hwakakanganiswa hweE. Coli sezvo vaiita kunge vari kurasa zvikamu zvemasimba ahwo kuti vavake zvikamu zve RNA. Michael Behe wezveBhayokemisti anozvidaidza kuti devorusheni izwi rinopikisa rekuti ivhorusheni. Saka kuvandudzika kunokwanisika muchinhu chinorarama. Hutachiona uhu hauna kushanduka kuita tupuka twemichero tunobhururuka.
Sezvataona pamienzaniso iyi, tsanangudzo dzesainzi hadzina humbowo hwakakwana. Hadzikwanisi kuturikira zvimwe zvinhu zvakakosha. Saka ngatidzokerei kuBhaibheri.
Mwari akasika zuva, Mwedzi, nenyeredzi zvatinodaidza kuti denga kana kuti nzvimbo dzakadzika-dzika. Nzvimbo dzakadzika-dzika handidzo denga chairo rinowanikwa munzvimbo dzekumusoro-soro kana kuti munzvimbo dzemweya dzatisingagoni kuona. Nzvimbo dzakadzika-dzika dzinomiririra Denga rezvemweya rinogara vatumwa uye kunoenda mweya yakaponeswa kana vanhu vafa.
Pakutanga kwaiva kusina kana chinhu.
Kusina zvinhu zvinoonekwa, kusina simba.
Sezvo kwaive kusina chinhu chekutanga nacho, kwaive kusina chinhu chingashandiswe kugadzira chimwe chinhu. Saka izwi rekuti “kusika” rinofanira kureva kuti kuita chinhu kubva pasina. Mwari oga ndiye anokwanisa kuita izvi. Kutsanangura kusika, vesainzi vanotanga nesimba ritoripo. Asi havakwanisi kutiudza kuti simba chii, kana kuti simba iri rinobvepi. Mwari ega ndiye anokwanisa kusika simba. Nezvinhu zvese kubva pasina. Jesu akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri akasika chikafu chaaikwana kupa vanhu 5 000. Hakuna vezvesainzi vanogona kuita izvi. Mwari ega ndiye anokwanisa kuita zvinhu kunze kwemurawo weFizikisi. Ndiyezve akaita mirairo yese iyoyo. Akaita nguva, asi anorarama kunze kwenguva. Haapihwe miganhu nemirairo yezvinhu zvese zvaakaita iye. Asi isu vanhu tinopiwa miganhu nemirairo yaMwari.
Muchidimbu, mibvunzo pamusoro pezviitiko zvaiveko Denga neNyika zvisati zvavepo haisi mibvunzo ingapindurwe nesainzi, uye haizombova. (http://curious.astro.cornell.edu/) kutaura uku kwakabva kuUnivesiti yeCornell. Muenzaniso wesainzi dziri pachokwadi dzinotarisa zvinhu zviripo zvinozivikanwa kwete fungidziro.
Mwari vakasika nzvimbo dzakadzika-dzika neZuva neMwedzi neNyika kubva pasina. Sezvo pasina kutaurwa nezvenguva, hatizivi kuti zvakatora nguva yakareba sei kuti Mwari vasike Nyika. Mwari aida kuti nyika ikudze zvinorarama saka vaifanira kuifukidza nemvura. Hupenyu hunoda mvura zhinji. Asi sezvo Nyika yaive kure neZuva, kwaitonhora kwazvo. Saka chikamu chemvura chaive pamusoro peNyika chaive chando chakaoma nyika ichiratidzika sebhora rechando, zvese zvakafukidzwa nechikamu chakadzika chechando. Iyi ndiyo yaive nguva yekutanga yechando chakaoma. (first ice age)
Zvino Mwari vakazoswededza Nyika yakaoma nechando pedyo nezuva chando chikatanga kunyunguduka. Chando chakaoma, pachainyunguduka, chaifamba nepamusoro peNyika chichiumba chimiro chepamusoro peNyika. Mwari vaisairira nekutenderedza chando chakaoma pamusoro peNyika kusvikira pachakakwenenzvera Nyika kuti iite chimiro chaidiwa naMwari.
Ipapo chando chakanyunguduka chese Nyika yese ikafukidzwa nemvura.
Asi mvura inopwira yonogadzana ichigadzira makore mudenga.
Saka makore akakura akaitika pamusoro peNyika makore aya achibva adzivirira zuva kuti risaonekwe. Pamusoro pemakore zuva raipenya asi pasi pemakore mvura yese yaive murima.
Pakatanga makore kuumbika akaitisa rima pasi pemakore.
Mosesi aiona zviitiko izvi muchiratidzo.
Chiratidzo ichi pachakaenda pamusoro penyika, Mosesi aingoona mvura chete. Mvura haina chimiro kana ruvara rwayo yega. Inotora chete chimiro chechinhu chakaitakura. Mvura iri pamusoro penyika haingaiti makomo nehova inongogara isina chayakaumba sezvaionekwa naMosesi.
GENESISI 1:2 Nyika yakaga isina kugadzirwa, isina chinhu; (Pamusoro pemvura paive pakati sandarara pasina chinhu, yaive isina chimiro. Yaingove nzvimbo isina chirimo inongoenda nakuenda)
Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika; (Mvura dzakadzika dzakabva pachando chainyunguduka nemagodo acho dzaive dzakafukidzwa nerima nenzira imwechete inoitwa nemakore akasviba anokonzereswa nemvura inopwa kubva mugungwa anokwanisa kuvhariridza zuva kuti risarove panyika).
Mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura.
Nekuti akanga asika nyika yaisakwanisa kuzvisika yega, Mwari akasarudza kuisa hupenyu panyika.
Mwari ega ndiye aiveko pamavambo.
Nguva yaive isati yataurwa nezvayo saka hatizivi kuti zviitiko izvi zvakatora nguva yakareba sei. Asi Mweya waMwari waifamba pamusoro pemvura Ari mubishi rekudyara mbeu dzeupenyu pasi penyika yaive pasi pemvura, yaive pasi pemakore. Mwari paanofamba, anounza hupenyu pasina hupenyu.
Saka Mwari zvino aizobvisa makore nemvura okudza hupenyu hwaive mumbeu.
Nekuti akanga adyara mbeu pasi pemvura, Mwari aive okwanisa kutarisa paNyika yaive ichiri yakafukidzwa nemvura nerima. Mwari vaive nezano rekuti aizozadza Nyika nehupenyu.
Saka panguva iyi kusika kwake kwaive kusina basa nenguva. Hatizivi kuti Mwari akatora nguva yakareba sei.
Saka hatikwanisi kutaura kubva kuna Genesisi 1 kuti Nyika ine makore mangani.
Mwari vakazotaura nguva paakasarudza kuisa hupenyu paNyika yaive yatosikwa kare.
Ngatichitarisei zvinotaurwa nevesainzi pamusoro pezera reNyika rinobva pamazuva anoiswa kubva pafungidziro dzeradioekitivi. Mazuva anobva paradioactive anobva pafungidziro dzakawandisa (dzinobva mupfungwa dzevanhu) nekuti hapana aivepo kuti apupure zviitiko izvi. Parizvino ngatisataurei nezvekukanganisa kuripo pachiitiko chekuora paradeioactive asi ngatitarisei zvakabuda kubva pakuisa mazuva nenzira yeradioactive.
Mudzidzi kuAmerica akaisa gwati kubva pahove ine makwapa inorarama yaaive abata mangwanani iwayo mumuchina wekupa mazuva weradioekitivi akawana mhinduro yekuti hove ine makwapa iwayo yaive yafa makore 2 300 adarika. (M S Keith na G M Anderson 16 Nyamavhuvhu 1963 Radiocarboni dating: fictitious results with mollusk shell in Science, p 634)
Muna 1991 Muzvare Joan Ahrens wekuCapetown akanyora mifananidzo pamatombo muchidzidzo chake cheAti. Mbavha dzakaba mifananidzo iyi kubva mumunda make dzikairasira mune imwe nzvimbo. Iyi ndiyo yakava mienzaniso yekutanga yezvinyorwa zvepamatombo yemaKoi San yakawanikwa munzvimbo dzakavhurika dzenyika. Radiocarbon akiserareta yeyunivhesiti yeOxiford ndeimwe inonzi inotaura chokwadi . Yakatarisisa mifananidzo iyi ikati yaive nemakore aisvika 1 200. Asi yaive yanyorwa mwedzi mitanhatu yaive yadarika.
Iyi mienzaniso miviri tichitarisa pakabva zvinhu uye mazuva eradioactive aive asiri echokwadi. Muzvare Ahrens akazoonawo mufananidzo wezvinyorwa zvake mumapepanhau akazokwanisa kutaura chokwadi pamusoro pekuti yakanga yakabva kupi. Venhoroondo vangadai vaine mufananidzo usina chokwadi pamusoro pevanhu vekutanga venyika yeSouth Africa, ichibva pane zvaizonzi zvinyorwa zvavo zvemumatombo.
Saka chidzidzo chekutanga kuSainzi: musatende zuva rakaiswa nesainzi richibva patsagurudzo yeradioactive sezvo rinokwanisa kuva riri rekunyepa.
Dambudziko rechipiri rabva rasimuka: kana chinhu chimwechete chikaongororwa kakawanda, unowana mazuva akasiyana nguva imwe neimwe. Saka munhu wezvesainzi anobva anonga zuva rinofambirana nefungidziro yake (ndiregererei ndiri kureva tsananguro yake) zvakanyatsonaka.
Kwakaputika chikwatamabwe muna 1801 pedyo neHualalei kuchitsuwa cheHawaii. Ongororo zhinji dzeradioactive dzakaitwa pabota racho dzakapa makore kubva pamakore 160 miriyoni kusika kumakore 3 000 miriyoni. Vanhu vaive vatora mifananidzo uye mavhidhiyo ekuputika uku saka paive nehumbowo hwepazvakaitika. Mazuva etsananguro dzesainzi aya aive ari ekunyepa pakuputika kwakaitika makore 200 kubva ongororo dzeradioactive dzisati dzaitwa.
Bota rakatorwa pachikwatamambwe chaitoitika paKilauea kuchitsuwa cheHawaii rinoerera richipinda mugungwa. Bota rakashandiswa raive ratorwa pasi pegungwa rakapiwa zera rekuti raive ragara kwemakore 22 miriyoni kupinda bota raive pamahombekombe egugwa. Asi iri raive bota renguva iyoyo sezvo chikwatamabwe chaive chichitoitika ipapo. Saka kudzika kwenyanza kwakashandura mazuva eradioactive ebota iri. Saka nzira yekutsvaga zera iyi ine nhema zhinji.
Kana vesainzi vakashandisa nzira yeuraniyamu-ridi ne potasiyamu agoni kutsvaga mazera ezvinhu, mhinduro yemazera aya yakasiyana nezvikamu zvinokwanisa kuita 45 kubva muzana.
Kuipisa zvinhu zvakanyanya, marasha anowanikwa mumatombo esedhimentari uye mabwe aya haakwanisi kupihwa zera rawo neradioekitivi.
Saka kufungidzira kuzhinji kunofanirwa kushandiswa kuitira kuti marasha kana kuti mapfupa emhuka akashanduka kuita mabwe apiwe zera.
Tatoona kuti kupa zera nenzira yeradioactive kunokwanisa kusataura chokwadi zvakadii. Saka fungai kuti kukanganisa kwakadii kungapindira kana isu tikaita fungidziro dzedu zvakare.
Semuenzaniso, zino rakaita dombo rakawanikwa kuNebraska naHarold Cook muna 1922. Henry Fairfield Osborn, Mukuru wenzvimbo yezvenhoroondo kuAmerica ye Museum of Natural History, akaona zviratidzo zvemunhu uye gudo muzino iroro. Rakatorwa sehumbowo “hweyanano isipo” (Missing link) pakati pemakudo nevanhu, chinofungidzirwa kuti igudo -munhu.
Zvisinei, mhuka yakazoshandurwa kuita nyoka ndiyo yaive “yanano yechinhu chisipo” sezvo ndiyo yaive chikara, kwete dzvinyu rinofamba nedumbu, saka zvakadaro yaive mhuka yepamusoro-soro yaikwanisa kutaura nekunzwisisana nemunhu. Zvino Mwari vakatuka mhuka iyi vakaishandura kuiita nyoka. Saka paive pasina mabhonzo echikara chekutanga, kwaingova nemabhonzo enyoka achakashandurwa kuva. Zvakadaro vesainzi havafi vakawana humbowo hweyanano uye chinhu chisipo ichi.
Zvakadaro gudo-munhu ane zita guru rekuti Hesperopithecus, akaumbwa kubva pazino rimwechete iri. Kubva pazino vakakwanisa kubuda nechimiro chechiso chake, kuti miromo yake yaive yakakura sei, nekuti muviri wake waive wakafukidzwa nevhudzi,uye kuti aive asina nguvo. Ichi chaive chinhu chinodakadza kwazvo pakuumbwa kwacho apo chinhu chaivepo kuti vaumbe mufananidzo raingova zino rimwechete. Vezvesainzi vanokwanisa kuita kukanganisa kukuru kwekumanikidza fungidziro dzavo kunze kwemiganhu yeruzivo rwunenge rwuripo.
Gudo-munhu uyu aishandiswa kuva “humbowo” hweshanduko yemunhu kudare reScopes kuTennessee muna 1925. Scopes aive mudzidzisi weBhayoroji aidzidzisa shanduko yemunhu kubva kumhuka muzvidzidzo zvake. Osborne aiedza zvakanyanyisa kuti zvikoro zvidzidzise shanduko yevanhu kubva kumakudo inodaidzwa kuti ivhorusheni. Saka ruzivo rwesainzi urwu rwakashandiswa nemazvo nevarevereri mumatare kurwira Scopes, akabuda mitongo iyi zvakanakisawo. Makore mashoma akazotevera Miziyamu yeAmerica yakachera zvakadzika pakawanikwa zino rekutanga naCook vakawana mamwe mazino aya akawanda, asi ese aive ari pamuridzi wawo chaiye akazoonekwa kuti yaive nguruve rudzi rwayo rwaive rusisawanikwe!
Ndinovimba kuti mienzaniso iyi ichakupai zivo yekuti vesainzi havana chokwadi pazvinhu zvizhinji zvavanotaura pamusoro penguva yakadarika kare.
Imwe tsananguro huru inorasisa vasiri vesainzi I Big Bang, inova isinganzwisisiki pakunzi chiitiko chekusika nyika nekuti vesainzi, kana vakatanga vasina chiro pakutanga, havakwanisi kutiudza kuti chakaputika chii. Saka vanonyepera kana kufungidzira kuti “zai recosimo” rakangonyuka. Vanoda munana uyu kuti uitike asi vasingatendi kuti munana. Rakabvepi? Hapana anoziva. Chero chinhu chakaputika chinofanira kuva chinhu. Asi pakutanga chaipo kwaive “kusina chinhu”, chero chinhu kana simba. Uye “pasina chinhu” hapana kuputika.
Hakutorina humbowo hunoonekwa hwekuti Denga nenyika zvaive zvakaita sei Big Bang isati yaitika. Kune tsanangudzo dzakawandisa, asi hapana humbowo. Sainzi dzakanaka dzinosimbiswa nehumbowo. Saka kusika kubva pasina hadzisi sainzi dzakanaka, zvichikwereta kushaikwa kwehumbowo.
Sainzi dzinoti Big Bang yakasika nyika nemuchadenga. Saka zvinoreva kuti nyika nemuchadenga zvaisavepo Big Bang isati yaitika. Saka zvichireva kuti kwaive kusina nzvimbo yekuti “zai” iri rigare, risati raputika. Saka Big Bang haisi sainzi dzakanaka. Vamwe vezvesainzi vepamusoro-soro vakaita saSteven Weinberg akatora mubairo weNobel naAlan Guth, vaimbokwiridzira Big Bang, parizvino vave kuzvibvisa padyo nayo.
Mumwe wesainzi anozivikanwa Carl Sagan mubhuku rake “cosmos” anotaura nezve “... ngano yesainzi yechizvino-zvino yeBig Bang” ... anowedzera achiti “mukozimo rimwechete nyika inosikwa neimwe nzira, makore mabhiriyoni gumi kana makumi maviri akadarika ikakura nekusingaperi” ... ( Peji 258-259). Sagan pachake aitenda zvikuru kusainzi uye Big Bang asi aikwanisawo kuona pairasika tsananguro iyi. Kushandisa kwake mazwi akaita sa “zvichida” kunoburitsa pachena kuti hapana humbowo hwakakwana pachiitiko ichi. Vese vanotaura nezveshanduko yemunhu kubva kumhuka vanotsanangura kutanga kwenyika nemazwi efungidziro akaita seekuti “pamwe” “zvimwe” “neimwe nzira” “zvinodaro” nemamwe akadaro.
Sainzi hadzina chokwadi chaicho kana dzichiedza kutaura pamusoro pekusikwa kwedenga nenyika.
Mwadhi yeyambiro kubva kuna Pauro:
I TIMOTIO 6:20 Iwe, Timotio, chengeta icho chawakapiwa, ufuratire kutaura kusinehanya naMwari nokuramba kunobva pazivo inonzi zivo, dziri nhema hadzo.
21 Iyo yakapupurwa navamwe, vakazorashika pakutenda. Nyasha ngadzive nemi.
Kana zivo ikarwisa Bhaibheri izivo yakaipa.
Sainzi musanganiswa wetsanangudzo dzekufungidzira nechokwadi, kunova kufungidzira kwakagadziriswa. Sainzi dzakanakisa kana muchishanda nechokwadi, asi dzinokwanisa kana kutadza kana muchishandisa fungidziro. Fungidziro dzinoshanda kana dzatsigirwa nechokwadi. Chero ipapo fungidziro inokwaisa kusagadzikika nekuti chokwadi chinozobuda chinokwanisa kusatsigira fungidziro kana fungidziro iyi isingatsananguri chokwadi. Tsanangudzo dzesainzi dzakavakwa pafungidziro nekuti vezvesainzi vaive vasipo pazvaiitika. Semuenzaniso muna 1958 vakatiudza zvichibva pamuyero wavo wepasi pano kuti mudziya wenzvimbo Venusi waive madhigirizi 18 uye kuti yaive yakafukidzwa nemakore saka yaive yakanyanya kufukidzwa nemvura. Takafunga kuti dzaive fungidziro dzakanaka dzaibva pamuero chaiwo nekuona chaiko. Asi pavakatora roketi vakaenda kuVenusi vakanowana kuti mamiriro ekunze eko aisvika madigirizi 450 uye makore acho aive akaitwa neasidhi yesarufa. Saka hakuna mvura kuVenusi.
VekuAmerica vasati vamhara kumwedzi vesainzi vakatiudza kuti nzvimbo dzakakwirira dzekumwedzi dzakaitwa nechikwatamabwe chakakanda mabwe anoitwa nebota sezvachinongoita paNyika. Pakasvika vanhu kunzvimbo dzakakwirira dzeMwedzi havana kuona humbowo hwechikwatamabwe. Saka zvinhu kuMwedzi hazvina kuitika semaitikiro azvinoita paNyika. Ndiro dambudziko guru rine tsanangudzo dzesainzi- hatimbozivi kuti vataura chokwadi chakadii. Kusvikira vambosvika panzvimbo vaera zvinhu zvese, vesainzi havafi vakava nechokwadi pamusoro pezvinhu zvakaitwa kubva patsanangudzo dzekufungidzira. Hapana wezvesainzi aivepo pakasikwa Denga neNyika. Hatina kana humbowo hunowonekwa hwekuti denga nenyika zvaive zvakaita sei, kusika kusati kwatanga. Saka ndiyo “nzvimbo isingasvike” sainzi dzakanaka.
Ndapota musarambe zvinotaurwa neBhaibheri nekuti sainzi dzataura chimwe chinhu chakasiyana. Mwari oga ndiye aivepo pakusika Nyika. Saka muono wake ndiwo kutaura kwega kwatiri nako kubva kuMuoni kana Chapupu.
Mudare redzimhova mutongi anoda kunzwa kubva kuchapupu “Wakaona zvichiitika here?” Mwari oga ndiye anodaira kuti “Hongu” kumubvunzo iwoyo.
Tichidzokera kuna Genesisi, Mwari akasarudza kuunza hupenyu mumbeu yaive pasi pevhu, pasi pemvura uye pasi pemakore.
GENESISI 1:3 Mwari akati: Chiedza ngachivepo, chiedza chakavapo.
Chiedza chezuva chaive chagara chavepo asi chaisakwanisa kudarika makore akakura aya kuti chirove nyika.
Mwari paakataura kuti “Chiedza ngachivepo”, Inzwi rakataurwa raMwari rakarova makore akakura rikamaparadza zvekuti zvikamu zvemvura zvaive mugore zvakabva zvashandurwa kuva magasi eokisijeni nehaidhirojeni. Magasi asina ruvara aya akaita ruchengetedzo rwakapoteredza Nyika rwunotendera chiedza chezuva kupinda.
Saka chiedza chezuva chakakwanisa kurova Nyika.
Kutsvuka kwekupisa kunobva kuZuva kunozopararira mukati memagasi aya koita nzira yakanaka yekuti kunenge kwagovaniswa panguva yakunozosvika panyika. Saka panenge pane mamiriro ekunze akagovaniswa zvakanaka kupoteredza pasi rese uye hakuna kunaya kwemvura kwaizoitika. Kunaya kunoitika panosangana mhepo inopisa neinotonhora. Semuenzaniso, pazuva rinotonhora kufema kwenyu kunopisa kukaenda pafafitera rakatonhora remotokari mweya une mvura unogadzana woita guti pafafitera.
Chikamu cheruchengetedzo chakaputsika pedyo nezuva mugore 2000 AD chakaburitsa gore regasi rehaidhirojeni uye okisijeni rakaitwa nekupatsanurana kwematani 3,3 miriyoni emvura. Izvi zvinoratidza kuti zviri nyore kuti mvura ipatsanuke kuva magasi maviri aya muchadenga.
GENESIS 1:4 Mwari akaona chiedza, kuti chakanaka; akaparadzanisa chiedza nerima.
Chese chinoitwa naMwari chakanaka. Hafu yeNyika yaive yakatarisana nezuva yaive masikati muchiedza chezuva. Hafu yeNyika yaive yakafuratira zuva yaive murima. Rima chaive chisiri chisikwa chakasarudzika, kwaingove kushaikwa kwechiedza.
Kusatenda, kunova chivi, kungori kushaikwa kweShoko, maGwaro Matsvene. Zvese zvatinotenda mazviri zvisingabvi muShoko rakanyorwa, rinonzi Bhaibheri, ndiko kusatenda kana kuti rima pamweya.
GENESISI 1:5 Mwari akatumidza chiedza, akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku. Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva rimwe.
Apa ndipo pakatanga kutaurwa nguva.
Kwaive kusina vanhu saka Mwari aive asina basa nekupima zvichienderana nemazuva evanhu.
Mwari oga ndiye aiveko saka aiera “nemazuva aMwari”.
“Zuva raMwari” rakareba sei? 1 000 emakore edu isu vanhu.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa, musakanganwe chinhu chimwe ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita samakore anechuru, namakore anechuru sezuva rimwe
Zuva rekutanga iri rinomiririra ruponeso. Moyo yedu yakafukidzwa nechikamu chakakura chezvivi nekusatenda. Kana tikatendeuka, Shoko raMwari rinorova chikamu chine zvivi rochiparadza kusvikira zvivi zvedu zvisisaonekwe. Tikasunungurwa kuzvivi tinofara muChiedza cheMwanakomana waMwari, Jesu Kristu, akafira zvivi zvedu. Rangarirai, aive angoriko asi nekuti zvino zvivi zvedu zvaregererwa, tave kukwanisa kuona runako rwake.
Mwari haaifanira kutora makore 1 000 kuti aparadzire makore nekubvisa rima. Akasarudza kutora nguva iyoyo. Akamirira kuti gore rechi 1 000 ripere. Zvino zuva rekutanga raive rapfuura ikava nguva yekutanga nhanho yepiri.
GENESISI 1:6 Mwari akati; Nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura
Chinhu chakakosha chekutanga pakurarama kuva nechiedza.
Zvino zvinhu zvinorarama zvinoda mhepo kuti zvefeme.
Saka Mwari akazadza nzvimbo iri pakati pemvura dzegungwa dzaive pasi peidzo dziri panyika uye nemvura dziri mudenga dzemumakore dzaakapatsanura mvura dziri muzvikamu zvemagasi eokisijeni nehaidhirojeni. [Mwari aizobatanidza magasi aya kuti ave mvura zvakare mumazuva aNoa, oita kuti mvura iyi inaye pasi paNyika. Saka chikamu cheruchengetedzo chemagasi chaizonaira pasi. Pasina chikamu cheruchengetedzo pamusoro peNyika, zvikamu zvakaipisisa zvezuva, zvakaita seultiravioreti, zvaizorova nyika vanhu votanga kufa vachiri vadiki kumashure kwemvura yaNoa.]
Chimwe chinhu chakafanana neichi chakaonekwa muna 2016 AD. Europa, mwedzi wekunzvimbo yeJupita, wakafukidzwa nechando. Munhu anoita tsvagiridzo dzezvemuchadenga Galileo akaenda kuJupita, akasvikako muna 1995, akazowana humbowo hwemvura inovava pasi pemwedzi weEropa, zvichiratidza kuti panokwanisa kuva paine gungwa pasi pechando chaiveko. Muna 2016 teresikopu yemuchadenga Hubble yakaburitsa mifananidzo yemakore eokisijeni nehaidhirojeni anokwira mudenga achibva pasi peEuropa achienda chinhamwe chemazana emakiromita muchadenga. Nekuti Hubble yakaona zvikamu zvehaidhirojeni neokisijeni, vesainzi vanotenda kuti makore aya imvura. Saka vakuda kuenda kunoita tsvagiridzo vachipinda nemugore iri kuti vaone kuti imvura chaiyo here. Muzvimbo dzemuchadenga vanotenda kuti mirazvo yealtravaoleti yezuva inopatsanura zvikamu zvemvura kuzviita mweya wehaidhirojeni neweokisijeni. Uhu humbowo hwekuti muchadenga tinowana zvinhu zvakafanana nezvakaitwa naMwari pakutanga paakatora mvura yekudenga akaiparadzanisa kuva mweya wehaidhirojeni neweokisijeni kuitira kuti agadzire ruchengetedzo rwekumusoro rwakapoteredza nyika.
Tichiwedzera, mwedzi wekuSatuni wechitanhatu pakukura Enceladus wakafukidzwa nechando chakachena uye nzira yawo yekutenderera Satuni ine denderedzwa rakadzika (rinodaidzwa kuti torus) rinogadzirwa zvakanyanya nemweya wehaidhirojeni neokisijeni usingafambi. Saka mweya iyi inogadzira chikamu chepamusoro chinopoteredza mwedzi weEnceladus.
Saka kana nyika yakatanga iri bhora rechando, zvino semwedzi Enceladus neEuropa nazvino ichiri mabhora echando, hazvishamisi kuwana zvikamu zvemvura, mweya yehaidhirojeni neokisijeni, mudenga pamusoro penyika, pakutanga.
Asi mhepo yepanyika inofanira kuva nemubatanidzwa wakakosha wemweya kuti ugone kubatsira hupenyu hunorarama pairi (isu vanhu). Chikamu chiri pakati pemvura chinonzi nzvimbo chinofanirwa kuzadzwa nezvikamu chaizvo zvemagasi: 21% yeokisijeni yakanaka kuitira kubatsira kupiswa kwechikafu mumasero emiviri yedu patinofema. Kupisa uku kunoita kuti tigare tichidziirwa sezvo mudziya wemiviri yedu unofanira kuva kuma 37%. Nzvimbo inoda gasi renaitirojeni ringangosvike 78% kuitira kuti zvinhu zvese zvigadzikike kuitira kuti okisijeni isabatsire moto inotsva zvakanyanya zvinozoita kuti moto itsve zvisingagoni kuti tiidzore. Ndege yemuchadenga yeApollo 1 muna 1967 yaive neokisijeni yaisvika 100% kakukweshera ketsaona kakakonzeresa rimi remoto raityisa zvekuti vanhu vatatu vese vanoita zvekuenda kumwedzi vakafa zvairwadza pasina aive ati akwanisa kuvhura musuwo kuti vabude.
GENESISI 1:7 Mwari akaita nzvimbo, akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo, nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo; zvikaita saizvozvo.
Muchadenga mune magasi anofemeka maidaidzwa kuti nzvimbo. Zvikamu zvemagasi aya zvinofanira kuva zvakanyatsoringana. Kana kuine okisijeni isingasviki 16% moto haitsvi uye chikafu hachipiswiwo mumasero emiviri yedu kuti tive nesimba uye tigare tichidziirwa. Kana okisijeni ikasvika panodarika 21% moto inonetsa kudzora kana kukatsva.
GENESISI 1:8 Mwari akatumidza nzvimbo, akati Denga. Madeko akavapo, namagwanani akavapo zuva repiri.
Isu vanhu “tinotarisa kumusoro” kuti tione Denga sezvo tinoziva kuti denga inzvimbo dzekumusoro. Saka muchadenga medu chiratidzo cheDenga.
Nekuti Nyika ine muchadenga mune mhepo, zvikamu zvemhepo zvinoparadzira zvikamu zvechiedza chezuva zvine ruvara rwedenga mumativi ese. Chiedza cheruvara rwedenga chine zvikamu zvechiedza chemasaisai uye chine simba rakawanda. Chikamu chechiedza cheruvara rwedenga chinopinda paNyika. Kana tikatarisa kumusoro, tinoona chiedza cheruvara rwedenga chichiuya kwatiri. Saka tinoona denga serine ruvara urwu rwatinoti rwedenga (blue).
Ichi chiratidzo chechigaro chaMwari cheushe.
EZEKIERI 1:26 Kumusoro kwedenga rakanga riri pamusoro pemisoro yazvo kwakanga kune chinhu chakafanana nechigaro chohushe, chaiita sebwe resafiri; (safiri idombo reruvara rwebhuru) pachinhu chakafanana nechigaro chohushe kwakanga kuno mufananidzo womunhu agere pamusoro pacho.
Mwari akaita makore 1 000 kuti aite muchadenga kuitira kuti zvinorarama zvikwanise kufema.
Muzviitiko zvatinosangana nazvo semaKristu, nhanho yekutanga ndeyekuponeswa apo tinotendeuka kubva kuzvivi zvedu zvinotigonesa kuti “tione Chiedza”. Nhanho yedu inotevera ndeyekuita chamweya cheHutsvene kana kunatswa.
VAHEBHURU 12:14 Tsvakai rugare navanhu vose novutsvene, nokuti kunze kwabwo hakunomunhu uchavona Ishe.
I VATESARONIKA 4:3 Nokuti kuda KwaMwari ndibwo vutsvene bwenyu, murege vupombwe.
Vesainzi vanoti hupenyu hwakatanga apo nyika yaive yakazadzwa nemagasi ane hukasha akaita seammonia nemethane. Asi havana kubvira vawana humbowo hwemagasi aya mumatombo enguva dzekutanga. Kutanga hupenyu pakati pemagasi anouraya haisi nyaya inokurudzira kuti tibvumirane navo.
Purofesa Libby vakawana mubairo weNobel vakatanga nzira yeradeoactivi kaboni (kana kuti radeokaboni) yekupa mazuva. Atomi renaitirojeni rine mapurotoni 7 nemanyuturoni 7 munyukiriya. Kana rikarohwa nenyuturoni rine simba rinosvika richibva kunze semurazvo wecosimic, atomi rinorohwa richibuda munyukiriya reatomi renaitirojeni mumhepo nyuturoni robva ratora nzvimbo raro muatomi. Zvino atomi rinenge raane mapurotoni 6 saka rinenge rava kabhoni atomi. Manyuturoni 8 akawandisa kuitira kabhoni, rinowanzogara riine manyuturoni 6 nemapurotoni 6. tinozvidaidza kuti kabhoni -14. Rimwechete remanyuturoni 8 akamira rinopinda muchikamu charinoburitsa erekitironi nekuchaja kwenegetivhi, saka rinobva razvishandura kuita purotoni. Atomi rinosvipa zvinhu rinodaidzwa kuti radeoactivi. Panenge paane mapurotoni 7 (nemanyuturoni 7) munyukiriya atomi rinobva radzokera kuva naitirojeni zvakare. Tinoti kabhoni-14 yawora kuti igadzire naitirojeni -14.
Saka tsanangudzo dzese dzekuisa mazuva neradioactive caboni dzinobva pafungidziro idzi.
Asi Libby paakaita ongororo akawana kuti huwandu hwekaboni -14 hunoitwa muchadenga hwaive hwakawanda ne 25% pane hwaiwora. Richard Lingenfelter muna 1963, Hans Suess wekuUnivesiti yeSouthern California vachinyora mubhuku retsvagiridzo dzejogirafu muna 1965 na VR Switzer achinyora muSainzi muna 1967 vakatsigirawo izvi. Saka mumhepo muchiri ne kaboni -14. Zvinoreva kuti denga harisati raane makore 30 000.
Purofesa Libby akaramba kutenda izvi achibva angosiyana nazvo achiti humbowo uhwu hwaive kukanganisa paongororo achisimba nezvake.
Purofesa Melvin Cook akawana mubairo weNoblekubva kuUnivhesiti yeUtah akadzokorora ruzivo rwa Suess naLingenfelter akasanganisa akaona kuti kaboni-14 iri kukasika nezvikamu 38 kubva muzana pakuwora. Zvinoreva kuti denga rine mhepo raane makore anosvika 10 000.
Kana nyika iine makore 4 600 miriyoni denga rinofanira kuva rakazadzwa nemweya weheriyamu unokonzereswa nekuora kweradioactive kweuraniyamu iri mumatombo. Uraniyamu iradeoactive inosvipa nyukiriya yeheriyamu atomi painoshanduka nhano nenhano kuva ridhi. Asi 99,96 % yehuwandu hwese uhwu hwegasi reheriyamu haumo mumhepo.
Vesainzi vanoti wakabva panyika uchienda muchadenga. Asi hakuna akaona kuita uku.
Wezvesainzi dzemuchadenga James Lovelock mubhuku rake Gaia: A New Look at Life on Earth, akanyora achiti nzvimbo dzekumipendero kwemhepo yenyika kunosangana nechikamu chitetetete chekunze kwenzvimbo dzezuva. Tinoita setinokanganwa kuti zuva riri kukanda mapurotoni zvisingaperi ( anogadzira mweya wehaidhirojeni) nemaatomi eheriyamu. Muzuva, maatomi ehaidhirojeni ari kumanikidzirwa zvakanyanya panzvimbo imwechete kuti agadzire gasi reheriyamu. Saka zuva rakapoteredzwa nenzvimbo ine chikamu chitete chemweya wehaidhirojeni neheriyamu unosvika chero kusi kwenyika. Saka nekuda kweizvi nyika inotenderera zuva munzvimbo dzehaidhirojeni neheriyamu yezuva. Lovelock akayera kuti nyika inowana haidhirojeni yakawanda kubva kuzuva pane yainorasikirwa nayo muchadenga. Nekuti heriyamu inorema kukunda haidhirojeni, chiitiko chimwechete ichi chinobatawo kuheriyamu.
Saka kana heriyamu yenyika isiri kutiza ichipinda muchadenga, saka ichiri mumhepo yedu. Huwandu hweheriyamu huri panyika hungori 0,035% pahuwandu hungawanikwe pamakore 4 600 miriyoni. Asi heriyamu iyi zhinji yacho mumhepo medu yakawanikwa kubva kuzuva, kwete kune kuwora kweyuraniyamu yenyika chete. Saka denga rinofanira kuva duku zvakanyanya pamakore kupinda makore 4 600 miriyoni.
Yaive yava nguva yenhanho yechitatu, zuva rechitatu.
GENESISI 1:9 Mwari akati; Mvura iri pasi pedenga ngaiungane pamwechete, kuti pasi pakaoma paonekwe; zvikaita saizvozvo.
Mvura yakaungana yakasiya nyika yakaoma iri payo yega. Gungwa rinomiririra vanhu namarudzi mazhinji vasina kugadzikika.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: mvura yawaona inogarwa nemhombwe, ndivo vanhu, navazhinji namarudzi, nendimi.
Sevasakarurama vanobatana pamwechete kupikisa Chokwadi, saka vanosiya vakarurama vari pavo vega. Nyika inomiririra vakarurama. Vatadzi vanoenda voramba vakarurama kuitira kuti vave pamwe nevazhinji voita zvinoitwa ikoko, ndiko kumawere kwekuenda kunokanganisa kukuru.
Mwari zvino akasimudza nyika kuti ive pamusoro pegugwa. Yaive nyika imwe yakakura, yaidaidzwa kuti Pangea (Nyika yese) nevesainzi. Mumazuva aNoa Mwari aizopatsanura nyika yakakura iyi kuva zvikamu zvidiki zvidiki .
GENESIS 1:10 Mwari akatumidza pasi pakaoma akati, Nyika; nemvura yakaungana akaitumidza akati makungwa; Mwari akaona kuti zvakanaka.
Pasi pakaoma pakapihwa zita, Nyika. Mvura haina kuwana zita. Chiitiko chekuungana kwemvura chainzi makungwa. Kumagumo kuchave nechiitiko chikuru apo makereke anobatana mukufanana kwawo kwekuramba chikamu cheBhaibheri. Makereke haachatore Bhaibheri semukuru wavo. Zvinoreva Shoko zviri kushandurwa kuti zvifadze zvido zvevanhu. MaKristu anoti pane chakakanganiswa muBhaibheri. Mazana emavhizheni matsva eBhaibheri, ese akasiyana siyana, akanyorwa. Izwi rechiGiriki rinoreva “kereke” (chechi) rinoreva kuti “vakadanwa' kana kuti “vakasarudzwa”. Kutenda kuBhaibheri zvinoita kuti munhu asadiwe zvishoma nezvishoma mumakereke.
GENESIS 1:11 Mwari akati; Nyika ngaimerese uswa nemirivo inobereka mbeu, nemiti inobereka muchero ina marudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika; zvikaita saizvozvo.
Zvino makore apararira chiedza chezuva chaive chorova Nyika, nemhepo inofemeka neNyika yakaoma yaparadzaniswa neGungwa, yaive yava nguva yembeu yakadyarwa naMwari muNyika kuti itange kumera. Miti nemirivo yakatanga kubuda, chaive chiitiko chekutanga mumunana wehupenyu.
GENESISI 1:12 Nyika ikameresa vuswa, nemiriwo inobereka mbeu dzina marudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, ina marudzi ayo; Mwari akavona kuti zvakanaka.
Rudzi rumwe nerumwe rwemiti nemirivo inobereka mbeu dzinodyarwa dzounza zvizhingi zverudzi irworwo.
GENESISI 1:13 Madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva retatu.
Nhanho yetatu yaive yekuita hupenyu hwezvirimwa nemiti, zvakaitika pazuva rechitatu, zvinomiririra hupenyu hwemweya, rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene. Mweya waMwari unobva watora nzvimbo yekuita zvose muhupenyu hwemunhu wotanga kutungamirira munhu kuti apinde muhurongwa hwaMwari hwakanaka pamusoro pehupenyu hwake. Mumashure taiita zvatinoda nehupenyu hwedu, asi vatendi vakazadzwa nemweya vanopira hupenyu hwavo kuna Mwari vomurega oraira hupenyu hwavo.
Mwari akatendera mamwe makore 1 000 kuti adarike asati aita chimwe chinhu.
GENESIS 1:14 Mwari akati; Zviedza ngazvivepo panzvimbo yedenga, kuti zviparadzanise masikati novusiku; kuti zvive zviratidzo, nenguva, namazuva namakore.
Kusvika parizivino budiriro yaive pamusoro peNyika. Asi nguva yaive yasvika kuti Nyika ikwane mumuono mukuru ichiwana nzvimbo yayo yakafanira kubva kuZuva, Mwedzi, nenyeredzi.
Nhanho yechina muhupenyu hwemuKristu, abva pakururamisirwa, kuitwa mutsvene, uye parubhabhatidzo rweMweya Mutsvene, munhu anofanira kuwana chinzvimbo chaakasarudzirwa naMwari mumuviri weMweya waKristu, inova kereke Yake.
Tinoda zuva, nyika ichitenderera pariri, kuitira kuti tive nemazuva nehusiku. Nyika inofanira kutenderera kamwechete mumaawa 24 echiringazuva chedu vanhu. Kana ikatenderera ichinonokera, zuva iroro rinorebesa nyika yopisa zvakanyanya. Vanhu vanonetawo zvakanyanya, nekuti vanenge vakufanira kushanda mumazuva marefu aya. Kana rikatenderera nekukasika zvakanyanya, zuva rinova pfupi zvakare zvekuti hatizokwanisi kupedza mabasa edu ezuva rimwe, tichiwedzera, zuva harizopisi zvakakwana zvirimwa zvinoda mudziya iwoyo nechiedza chazvinowana kubva kuzuva.
Saka zuva rinobva pamatendererero anoita nyika. Mudziya wezuva rimwe unobva pachinhambwe chinenge chiine Nyika kubva kuZuva. Tikaswedera zvakanyanya tinotsva zvakanyanya, tikaenda kurewo tinotonhorwawo zvakanyanya. Saka mamiriro ekunze aya akakosha.
Gore rinobva panguva yakatorwa neNyika kuti itenderere Zuva. Saka mafambiro eNyika akakoshesesawo. Kana ikafamba nekukasika, gore rinova pfupi zvirimwa hazviwane nguva yakakwana kuti zvikure. Kana nyika ikafamba ichinonokera, gore rinoreba nguva yechando inorebawo zvichireva kuti hatizowane chikafu chakakwana kubva muzhezha kuti chitisvitse pakupedzazve chirimo.
KuEgipita nyeredzi yakajekesesa Sirius inoonekwa zvishoma pamusoro pekumuganhu wekumabvazuva awa rimwechete zuva risati rabuda gore rega rega pazuva rimwechete. Zuva iri raigaroitwa zuva rekutanga kwegore idzva. Ndiyo nguva imwechete yaizara rwizi rweNile zvekufashukira ruchisiya ivhu rine kudya muminda kuitira nguva yekurima itsva. Ijipita ndiyo yakava nekarenda rakanaka rakatevedzerwa naJulius Caesar achiitira hushe hweRoma. Nhasi uno tinoshandisa karenda rakangoda kuita sairoro.
Vanhu vanoenda kumwedzi vanoshandisa nyeredzi kutsvaga nzira yavo yekuenda kuMwedzi nekudzoka.
Mwaka zvikamu zvegore. Nzira iri nyore kupatsanura gore kuita mwaka ndeyekushandisa Mwedzi. Mwedzi wakazara, unopera zvishoma nezvishoma kusvikira tisisaone Mwedzi, unodzokazve kuva Mwedzi wakazara munguva ingangokwane mwedzi. Kutenderera kumwechete kweMwedzi kunoda kuita chikamu chimwechete muzvikamu gumi nezviviri zvegore. Saka Mwedzi unopatsanura gore kuva mwedzi gumi nemiviri. Mwaka wega wega unotora mwedzi mitatu. Saka Mwedzi unotibatsira kuti tizive kuti tiri mumwaka upi. Chiratidzo chakanyatsokwana chemwaka chinopiwa nezvikwata zvenyeredzi zvinoita zviratidzo mudenga.
Nyeredzi zhinji dzinopinda muzvikwata. Kune zvikwata 88 zvinonyatsoonekwa. Nyeredzi yekumawodzanyemba, Polaris, inonongedzera kumawodzanyemba. Nyeredzi shanu dzeMuchinjiko wekuchamhembe unotibatsira kuti tizive kuti kuchamhembe ndekupi. Nyeredzi dzakagara dziri chinhu chakakosha mumatenga kuti dzitibatsire kuona nekuziva mativi, kunyanya kune avo vanofamba nemumvura vari munyanza mukati memasenturi akadarika. Nhasi uno kune GPS iri kutorawo mukombe uyu.
Muchidimbu chenyika chekuchamhembe tinoshandisa Muchinjikwa wekuchamhembe kutsvaga nzira. Ichi chiratidzo chechokwadi chemweya kuti Muchinjikwa wepaCalvary ndiwo unotipa nzira kuti tigone kuenda kudenga.
Nyeredzi yekumawodzanyemba inogara yakanongedzera kumawodzanyemba. Chiratidzo chaJesu Kristu kuti ndiye mumwechete zuro, nhasi nekusingaperi. Ndiye muponesi asingashanduke.
VAHEBHURU 13:8 Jesu Kristu anogara akadaro zuro, nanhasi nokusingaperi.
Nyika mukutenderera kwayo Zuva inobvumira vanhu kuti vaone zvikamu zvakasiyana zvedenga mukati memwaka yakasiyana. Tinoona nyeredzi nguva dzeusiku kana tikatarisa rutivi ruri kubva kuzuva.
Mukati memwedzi mitatu yemwaka wega wega kune zvikwata zvenyeredzi zvakasarudzika zvinoonekwa mudenga munguva dzeusiku. Kana nyeredzi idzodzo dzaionekwa usiku, vanhu vaibva vaziva kuti vari mumwaka upi wegore. Zvikwata zvenyeredzi ndiro rakava karenda rekutanga kushandiswa nevanhu.
GENESISI 1:15 Ngazvive zviedza panzvimbo yedenga, kuti zvivhenekere panyika; zvikaita saizvozvo.
Mwari akaisa Nyika pachinzvimbo chakanaka kubva kuZuva neMwedzi. Nyika inofanira kuva pachinhambwe chemakiromita 150 miriyoni kubva kuzuva. Nyika iri pachinzvimbo chingangoite 380 000 km kubva kuMwedzi. Mwedzi unosimudzawo mvura yegungwa yoita mafungu. Izvi zvinobatsira kusanganisa manyutirienzi mugungwa kuitira kuti mvura isawore. Dai mwedzi waive pedyo, mafungu aizove akakwiririsa. Dai Mwedzi waive kure, mafungu aizova akadzikira zvakanyanya. Pangadai pasina kusanganiswa kwakakwana kwemanyutirienzi mugungwa.
GENESISI 1:16 Mwari akaita zviedza zvikuru zviviri; chiedza chikuru kuti chibate vushe masikati, nechiedza chiduku, kuti chibate vushe vusiku, nenyeredzi vo.
Mwari haana “kusika” kubva pasina pazuva iri.
Bhaibheri harina kushandisa izwi rekuti “kusika”.
Izwi rekuti “kuita” ndiro rakashandiswa. “kuita” rinoreva zvinhu zviviri. Rinokwanisa kureva kuti kugadzira chinhu nekubatanidza zvinhu pamwechete, kana kuti kumanikidza munhu kana chinhu kuti aite chinhu kuitira kuti usvike pachinangwa chako. Denga nenyika zvaive zvatosikwa kubva pasina. Saka paive pasina chikonzero chekuti aite nyika kana denga kubva pane chimwe chinhu, zvaive zvatovepo. Asi Mwari zvino aive oda kuti zvitonge matenga eNyika nekuva zvinhu zvikuru zvinopa chiedza.
Bhaibheri rinoshandisa izwi rekuti “kuita” kureva kuti akazviita kuti zviite basa, rekuva vatongi vemasikati neusiku. Akaita kuti Zuva ritonge masikati, akaita kuti Mwedzi utonge usiku.
Zuva neMwedzi zvaive zvatovako kare zvaive zvisingadi kuunzwa pakurarama. “Akaita kuti Zuva neMwedzi zviite chimwe chinhu”. Akazviita kuti zvizadzise chinangwa chazvo.
Akaita kuti chimwe nechimwe chiite basa racho rachakagadzirirwa.
Chiedza chazvo chinofanira kutonga masikati neusiku. Zuva rinotonga masikati, kwete husiku. Saka Zuva rinoda Mwedzi kuti riratidze chiedza chezuva kuNyika ine rima. Chiedza chezuva chakaratidzirwa tinochidaidza kuti chiedza chemwedzi , chinotibatsira kuti tikwanise kuona tichifamba usiku kana Mwedzi wakagara.
Jesu, Shoko raMwari, anofanira kutonga hupenyu hwedu . Jesu paakakwira kudenga, chiedza chakabva panyika. Zvino Mwedzi (kereke) yakasvika, chinangwa chavo chaive chekuratidzira Chiedza cheShoko raMwari. Kukanganisa kwakaitwa uye kuchiri kuitwa nekereke ndekwekuti tinoratidzira chiedza chedu, mafungiro edu. Kana kuti tinoratidzira mafungiro evanhu vane mbiri. Kana kuti tinoratidzira tsika nezvinyakare zvekereke yatinopinda. Mafungiro ese aya nemazano aya, kana zvisiri kubva pamaGwaro, ndiro rima zvaro. Mwedzi hauna chiedza chawo pachawo. Unokwanisa chete kuratidzira chiedza chezuva kunyika iri murima. Basa redu nderekuratidzira Shoko raMwari rakanyorwa. Hapana chimwe. Hatina chiedza pachedu, saka tinotobatsira kana tichiratidzira Bhaibheri, rinova Chiedza chaMwari.
Chinhu chatingabatisise. Kana nyika yava pakati peZuva (Mwari) neMwedzi (kereke) mumvuri weNyika unovhariridza Mwedzi toti Mwedzi waora. Saka kuva munyika kunovhariridza kupupura kwevaKristu vanofanira kuva vachiratidzira Shoko raMwari, pachinzvimbo chekusimbirirana nekuwanana nezvenyika.
GENESISI 1:17 Mwari akazviisa pasi penzvimbo yedenga, kuti zvivhenekere nyika.
Mwari akaisa Bhaibheri seChiedza chikuru chechokwadi kuti ritiratidze nzira yekuenda kuDenga. Akaisa kereke kuti maKristu varatidzire Bhaibheri kune vamwe, mukutaura kwavo uyezve mararamiro avo.
Zvinosuwisa Mwedzi unopfuura nemunguva dzaunozoratidzira chiedza chishoma nechishoma. Zuva harifi rakarasa kubwinya kwaro. Kukanganisa hakufi kwakawanikwa pana Jesu. Kereke ndiyo inopiwa mhosva kana chapupu chedu semaKristu chikadzima.
MAKO 4:16 Navakakushwa parukangarabwe vakaita saizvozvo, ndivo vanoti kana vanzwa shoko rakakushwa, vanorigamuchira pakarepo nomufaro.
17 Asi havano mudzi mavari, asi ndivo vechinguva chiduku; pashure kana kutambudzika nokuvengwa zvichiuya nokuda kweshoko, pakarepo vanogumburwa.
18 Vamwe vanokushwa muminzwa ndivo vanonzwa shoko,
19 Asi kufunganya kwenyika, nokunyengera kwefuma , nokuchiva zvimwe, zvinopinda, zvichivhunga shoko rikashaiwa zvibereko.
MaKristu anosimbira zvakanyanya pakuwana zvinhu zvinodarika zvehupenyu vorasikirwa nerudo rwekutanga muna Mwari rwavaive narwo pavakatanga kuponeswa. MaKristu anoda kwazvo kubudirira pakuita pfuma yepasi rino.
I TIMOTIO 6:5 Nekukakavadzana kusingaperi kwavanhu vanomurangariro wakavodzwa, vakatorerwa zvokwadi, vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa.
Vanhu vanowira zviri nyore muevhangeri remakaro.
GENESISI 1:18 Zvibate vushe masikati novusiku, nokuparadzanisa chiedza nerima; Mwari akavona kuti zvakanaka.
MaGwaro anotiudza kuti chii chakanaka (zvakanyorwa muBhaibheri ndicho Chiedza chezuva) uye kuti chii chakaipa (zvisina kunyorwa muBhaibheri ndiro rima pamweya kunyangwe zvichinzwika sezvakanaka kwatiri vanhu venyama).
Semuenzaniso: nzira yekuti zvinhu zvese ndezvehurumende yaive nekubata kweutsinye pamusoro peRoman Catholic, Poland vanhu vakatambudzika kubva pakushaiwa zvinhu zvakakwana kuti vararame asi kutenda kwavo muna Mwari kwaive kwakasimba. Pope John Paui II akaita basa guru pakubvisa hutongi hwecomunisimu muPoland waive musha wevanhu vazhinji vainamata Roman Catholic. Saka zvese zvakaita sezvakanaka. Iyi yakaonekwa senhanho huru yekuti maKristu asununguke. Zvino kereke yeRoman Catholic yakabva yaona kuti vanhu vazhinji vekuPoland vaive vagamuchira pfungwa yekuAmerica yekuzviunganidzira pfuma. Makaro ekuda kubudirira, kutenda kwevakawanda kwakawira pasi. Kereke yeCatholic yaitya kuti vazhinji vekuPoland vaive vakaneta kwazvo pamweya, uye vaive voenda kure naMwari zvakanyanya kupinda zvavaive pakutanga.
Saka kusanganisa chitendero nezvematongerwo enyika zvinoita sezvakanaka panguva iyoyo asi mumashure zvaive zvisiri zvinhu zvakanaka.
Mwari aimirira kusvikira makore 1 000 apera asati atanga nhanho yake yaitevera yekuisa hupenyu paNyika.
GENESISI 1:19 Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva rechina.
Hapana kutaurwa nezvevusiku. Saka Mwari vari kuedza kutiudza kutii?
Nguva yevusiku inokwanisa kuva chiratidzo chenguva yekutambudzika kukuru iri kumapeto kwenguva yekereke yekupedzisira (Nguva yeKereke yeChinomwe) Jesu anotora kereke yake kuenda nayo Kudenga kumabiko emuchato. Ndiye Chiedza, saka kana Chiedza chisisipo paNyika ipapo nyika inenge yave murima. Mangwanani anozomiririra kudzoka kweChiedza paanoita Mereniyamu otonga nyika kwemakore 1 000. (Hitler aiti aizotonga kwemakore 1000, akakanganisa nekuti akangoita makore 12 chete. Asi munokwanisa kuona kuti aiedza kutevedzera ani paakati aizotonga makore 1 000.)
Madeko anozoreva kumapeto kwekereke yechinomwe, nguva yekutambudzika kukuru isati yatanga, apo Chiedza chakazara chemaGwaro chinenge chadzoserwa paNyika. Luther akadzosera kuyananisirwa, kuponeswa nekutenda. Wesley akadzosera Hutsvene, kurarama muhutsvene. Pentecositi yakadzosa rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene nezvipo zvemweya. William Branham akadzosa Chokwadi chemaGwaro sekuti zvipo zvemweya zvikuru ndizvo zivo nehuchenjeri. Zivo yekuti vhesi kana chirevo chemuBhaibheri chinorevei, uye huchenjeri hwekukwanisa kuyananisa zvikamu zvakasiyana zveBhaibheri mumusoro wenyaya onozvibatanidza zvese kuti zvive zaruriro yakadzama. Saka maKristu vanozokwanisa kutsanangura mavhesi emuBhaibheri muzvirevo zverimwe vhesi remuBhaibheri, pachinzvimbo chekupa pfungwa dzavo dzavanofunga kuti Gwaro rinoreva.
I VAKORINTE 12:7 Asi mumwe nomuwe unopiwa kuratidzwa kwoMweya, kuti vose vabatsirwe.
8 Nokuti umwe unopiwa nomweya Shoko rovuchenjeri, mumwe shoko rokuziva noMweya iwoyo.
10 Mumwe kuita mabasa esimba; mumwe, kuprofita; mumwe, kuzvizivisa mweya; mumwe marudzi endimi; umwe kududzira ndimi;
11 Asi izvi zvose zvinoitwa noMweya iwoyu mumwechete, unogovera umwe nemumwe sezvaanoda.
Minana inofadza asi Mwari anoisa ruzivo pamberi peminana. Saka Mwari anotarisa chokwadi cheBhaibheri sechinhu chekutanga kuti tikoshese.
Kuziva zvinorehwa neBhaibheri kwakakosha, kunyanya zviratidzo zvechiporofita zvese. Kana tisingazivi maGwaro tinonyengerwa zviri nyore, kunyanya apo zviitiko zvenyika zvinowandisa makereke nezvematongerwo enyika anotora muonero nemaitiro anorwisa maGwaro.
Saka Chiedza chichaveko panguva dzemadeko apo Mwenga anodzokera kudzidziso yekereke yekutanga yaiteerera dzidziso yevaporofita.
ZAKARIA 14:7 Asi richava zuva rimwe rinozivikanwa naJEHOVA, hapangavi namasikati kana vusiku, asi nenguva yamadekwana chiedza chichavapo.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.
Saka zvakavanzika zvaMwari zvinoziviswa mukati menguva yechinomwe, kana yekupedzisira, yekereke.
Iyi ndiyo nguva yemadekwana rima renguva yekutambudzika risati rapindira.
Zvino Mwari havana kutaura husiku (Kutambudzika kukuru) vakaenderera mberi vakataura nezvemangwanani (kutanga kweMereniyamu kutonga kwaJesu paNyika)
Izvi zvinoreva kuti kereke yaMwari yechokwadi, Mwenga wake, haazopindi mumakore matatu nehafu eKutambudzika kukuru. Vakanzvenga usiku, apo vachange vari Kudenga mukati memakore matatu nehafu apo kunenge kusina usiku kusina rima kana zvivi.
Saka Mwenga waKristu haazopindi munguva yeKutambudzika kukuru.
Mwari pavakasarudza kuisa hupenyu paNyika yaaive asika, akasarudza kutora mazuva 7 aMwari, kana kuti makore 7 000 edu. Paive pasina vanhu kusvika pazuva rechitanhatu saka paive pasina basa nekushandisa mazuva evanhu.
Saka mumakore 6 000 Mwari akashandura chinhu chaive chisina hupenyu, chinhu chakaipa kuchiita paradhiso. Zvino zuva rechinomwe raizova remwanakomana waMwari, Adamu, neMwenga wake kuti vatonge Nyika kwemakore 1 000. Asi imwe nguva mukati memakore 1 000 iwayo, mukadzi akasvotwa nezvaaive apiwa naMwari, akateerera dzidziso itsva yaive yakasiyana neyakapiwa naMwari. Akabvisa ziso rake paShoko raMwari, chivi chikapindira Satani akatora nyika. Parizvino Satani atonga Nyika kwemakore 6 000 kubva paakakanganisa hurongwa hwaMwari mumunda weEdeni akashandura paradhiso reEdheni kuva nzvimbo yakaipa inourayanwa. Inokurudzirwa neruvengo, rwakaita kuti vanhu vanosvika zana remamiriyoni vauraiwe mudzihondo musenturi yadarika. Nhasi uno vanhu vanoramba Shoko rakanyorwa vachiziva vachiti harina kukosha. Vanobvunza kuti rinoita musiyano wei? Vanozvigutsa, vanonzwa kuti havade chiro, saka hapana chikonzero chekugadziriswa. Hunyengeri hwese uhwu huchaparadzwa nemafungu enguva yeKutambudzika kukuru acharova nyika semhepo yemweya inoparadza ichiparadza zvinhu zvose. Asi Nyika ichaparadzwa nemoto, kwete mvura sezvazvaive panguva yaNoa.
II PETRO 3:10 Asi zuva raShe richauya sembavha; naro denga richapfuura nokutinhira kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika nemabasa ari mairi achapiswa.
Iyezvino ndiwo mazuva evanhu. Munoita madiro.
Nguva yekutambudzika kukuru ndiro zuva raJehova, apo Anoita zvaanoda nerudzi rwevanhu rwune zvivi, kuitira kuti achenese Nyika kuitira kuuya kweMereniyamu.
Jesu anofanira kuparadza kuipa kwese pamapeto penguva yekutambudzika kukuru.
Zvino anobva agadza hushe hwake hweMereniyamu. Saka Jesu, Mwanakomana waMwari, neMwenga wake, kereke yechokwadi, vachatonga Nyika kwemakore 1 000 vozadzisa zuva rechinomwe raidiwa naMwari pekutanga, asi rakakanganiswa nemwanakomana waMwari wekutanga, Adamu, neMwenga wake.
ZVAKAZARURWA 20:4 Ipapo ndakavona zvigaro zvovushe, vakagara pamusoro pazvo, vakapiwa simba rokutonga, ndikavona mweya yavakanga vagurwa misoro nokuda kwekupupura kwaJesu, nokweshoko raMwari, navose vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho, vasina kupiwa chiratidzo pahuma dzavonaparuvoko rwavo; vakararama vakabata vushe pamwechete naKristu makore anegumi ramazana.
Chidzidzo chatinodzidza ndechekuti Satani anokwanisa kukanganisa zvinhu ononotsa hurongwa hwaMwari, asi haakwanisi kumisa Mwari kusvika pakuita zvaanoda. Jesu Kristu ndiye mukundi mukuru. Saka zvinotibatsira kuva parutivi pake. Ndiani anoda kumira nemukundikani? Chiedza chinozongotonga pamusoro perima.